php and asp - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Programming Languages - 1 » PHP » ဆွေးနွေးချက်များ
Find More Posts by taungporthar
ပို့စ် 66 ခုအတွက် 228 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုယ်ကို ကိုတန်ဖိုးထားလျှင် အခြားသူများလည်းလေးစားကြရသည်။
အများအကျိုးဆောင်လျှင် ကိုယ်အကျိုးအောင် မည်။
“ကိုယ်ချင်းစာနာ နားလည်ပါ သင်လည်းလူသားတစ်ဦးပါ။”
Money is truth.
Understanding myself is Ultimate.
Last edited by Desert Fox; 10-11-2008 at 05:57 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Desert Fox အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Desert Fox ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
၃) php က open source ဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းလောက်ခက်လာရင် internet ပေါ်တက်ရှာလိုက်ရုံပဲ . .
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ မြတ်ဘုန်းမို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
MoonLay, royalheartgate, soemaung, tartarlay18, unlimited, yeman, YKNKTO
15-11-2008, 11:08 AM
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မြတ်ဘုန်းမို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မြတ်ဘုန်းမို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
21-11-2008, 07:58 PM
Last edited by မြတ်ဘုန်းမို; 21-11-2008 at 07:59 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မြတ်ဘုန်းမို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဝေယံ, royalheartgate, YKNKTO
Originally Posted by မြတ်ဘုန်းမို
Last edited by tu tu; 23-11-2008 at 08:54 AM.. Reason: Quote ပြင်ရန်
php languageနဲ့ ရေးချင်လို့ wamp ဆိုတဲ့server ကိုတင်လိုက်ပါတယ်.ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုpost လုပ်ပြီး run ရမလဲဆိုတာမသိလို့ပြောပြကြပါခင်ဗျာ------
Last edited by toat; 14-12-2008 at 12:02 PM..
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 36 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ code4freedom အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by code4freedom
Originally Posted by zawnaingxxx
Originally Posted by code4freedom
Last edited by code4freedom; 08-12-2008 at 08:25 PM..
တည်နေရာ: Hamburg, Germany
ပို့စ် 40 ခုအတွက် 266 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
[SIZE="3"][COLOR="DarkRed"]I will be your best friend as long as you don't cross my line!! But once you did you will die!! [/COLOR][/SIZE]
Last edited by unlimited; 12-12-2008 at 06:47 AM..
Last edited by code4freedom; 12-12-2008 at 09:03 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ code4freedom အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မြတ်ဘုန်းမို, royalheartgate, unlimited
16-12-2008, 12:44 AM
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ code4freedom အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
16-12-2008, 01:14 AM
16-12-2008, 08:54 AM
မြတ်က အစ်ကိုရယ် . . . မြတ်ရေးမယ့်ဆိုဒ်ကို account ပေးရောင်းမှာ . . . . application site ကလေး လိုမျိုးပေါ့ . . . မြန်မာနိုင်ငံထဲက လူတွေပဲသုံးမှာပါ . . . မြတ်ရဲ့ဆိုဒ်ကို လူတစ်ယောက်က account ၀ယ်ထားတယ် ဆိုပါတော့ . . . . တခြားတစ်ယောက်က လာကြည့်ရင် ပေးမမြင်ချင်ဘူး . . . . browser တွေရဲ့ history မှာကျန်ခဲ့တဲ့ url ရဲ့ name ကိုလည်း ဒီurl ပဲဖြစ်စေချင်တာ . . . မြတ်ရဲ့ security အတွက်ပဲအစ်ကိုရယ် . . . search engin တွေနဲ့လည်းရှာမတွေ့စေချင်ဘူး . . . . ပြောရရင် မြတ်သုံးစေချင်တဲ့လူတွေကလွဲလို့ မြတ်ရဲ့ဆိုဒ်ကို ဘယ်သူ့ကိုမှပေးမတွေ့စေချင်ဘူး . . . အဲလိုမျိုး . . .
Last edited by မြတ်ဘုန်းမို; 16-12-2008 at 08:56 AM..
Last edited by မြတ်ဘုန်းမို; 16-12-2008 at 12:28 PM..
17-12-2008, 11:17 PM
It's taking too much time for me when I try to type in burmese. That's why I use English most of the time. Still trying to type in burmese faster and correctly
Last edited by code4freedom; 17-12-2008 at 11:17 PM..
မူယွန့်, junemoe, runner.zaw
Find More Posts by thurein53
Originally Posted by taungporthar
ကတော့ data ကို hard disk ထဲကိုပဲ သိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်~~ကျွန်တော်လဲအဂ်လိပ်လို့ဖတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် မလေ့လာရသေးတော့ သိပ်နားမလည်သေးလို့ပါ ~~ မှားလို့ချင်ရင်လဲနားလည်ပေးပါခဗျာ~~ ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ခဗျာ~~
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thurein53 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
tu tu, Ye Aung